Free FLV ka 3GP Ntụgharị
> Resource> Free> Top 5 Free FLV ka 3GP converters
3GP faịlụ Ọkpụkpọ bụ a aha e nyere a faịlụ akpa na-agụnye ma video na ọdịyo faịlụ. Akacha, video faịlụ n'ime 3GP akpa bụ MPEG4 format, mgbe ọdịyo faịlụ nwere ike ịdị iche iche. A ọnụ ọgụgụ buru ibu nke oge a ụbọchị smartphones ahu nagide 3GP faịlụ formats, ma, dị ka ọ bụ a pụtara amaghị format ka ọtụtụ ndị mmadụ, a ọma faịlụ converting omume dị oké mkpa ka ndị ọzọ mfe ele na-arụ ọrụ na ha. FLV faịlụ Ọkpụkpọ, ma ọ bụ Flash Video, bụ otu n'ime ndị akacha eji video formats na internet, na ọ bụ ihe ka mma usoro nke oke maka ndị dị otú ahụ weebụsaịtị dị ka Youtube, Dailymotion, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Mgbe ọtụtụ smartphones na-enwe ike mfe egwu FLV videos online, iji n'ezie budata ha na-egwu ha na ngwaọrụ gị na-achọ a àgwà video akakabarede usoro. Isiokwu a ga-elekọta kasị mma FLV ka 3GP akakabarede omume, niile 5 nke na-depụtara n'okpuru.
Dị maka ma Windows na Mac kọmputa, na Wondershare Video tọghata bụ obere a dị mfe video akakabarede omume na ndị ọzọ a zuru ezu video edezi Suite. Ke adianade do n'ịtụgharị FLV formatted videos ka 3GP, nakwa dị ka ọtụtụ ndị ọzọ na formats, usoro ihe omume e dere video edezi na DVD-ere ọkụ arụmọrụ iji ekwe ka ndị ọrụ dezie na ike ha omenala DVD. Ọ nwere ike jikọọ video-kpọọ ngwaọrụ, dị ka camcorders na smartphones, na ndekọ video jidesie gị na kọmputa na ezigbo oge. Ọrụ nwere ike ahu nagide usoro ihe omume weghara na ibudata videos online na tọghata ha ka ha mkpa usoro.
iSquint bụ usoro ihe omume nanị maka converting video faịlụ-eji na iPods, iPhones, na ihe ndị ọzọ nile Apple mobile ngwaọrụ. Ọ dị mfe iji na ndị otu streamlined imewe ka iTunes. Ọ bụ iji tụnyere QuickTime Pro ma na-eburu ukwuu nke otu ọrụ, ma bụ kpam kpam free na ọtụtụ Mkpa ọkụ na ndị ọzọ streamlined.
MediaCoder bụ ihe ọzọ zuru video akakabarede, edezi, na playback Suite. Usoro ihe omume ike ga-eji dọwara DVD, CD, na ọtụtụ ndị ọzọ formats nke ahụ mgbasa ozi, na ọ bụ ike iji tọghata ndị video faịlụ n'ime ihe fọrọ nke nta ọ bụla faịlụ Ọkpụkpọ dị adị. Ọ na-agụnye a ọgaranya video edezi omume, ikwe ọrụ iji hazie, welie na dezie ha video faịlụ ọtụtụ. Ruru ka nke ukwu arụmọrụ, MediaCoder bụ otu n'ime toughest ka n'ụzọ zuru ezu ịghọta, ma ọ bụ nke ọma ruru ego.
DVDVideoSoft Free Studio awade ọrụ a ukwuu ego nke-ahọrọ karịa ihe ọ bụla nke ndị ọzọ Ndenye na nke a ndepụta. Onye ọ bụla akụrụngwa dị maka nbudata nanị, ma ọ bụ ha niile nwere ike ibudata na otu otu ụlọ. Ọ bụrụ na onye ọrụ naanị chọrọ ibudata Youtube videos, ha nwere ike nanị download onye nke, ma ọ bụrụ na ha chọrọ ka ibudata Youtube videos na mgbe ahụ tọghata ndị faịlụ site na FLV ka 3GP ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ format, ha nwere ike ibudata dum ụlọ ime otú ahụ. The DVDVideoSoft Free Studio bụ Wezuga mfe iji na-ejegharị ọrụ site onye ọ bụla nzọụkwụ n'ụzọ doro anya.
The mfe ntinye on ndepụta a site n'ebe dị anya, Zamzar na-arụ ọrụ nanị online na-adịghị achọ ihe ọ bụla ebudatara omume bụla. Ọrụ nanị họrọ faịlụ na ha na kọmputa ha mkpa converted, họrọ mmepụta faịlụ Ọkpụkpọ ha chọrọ ya converted n'ime, tinye ha adreesị ozi-e, na pịa tọghata. Niile ọrụ ndịnezie etịbe na Zamzar sava, na ọrụ ga-enweta ihe email nwere njikọ ibudata ha chegharịrị ọhụrụ faịlụ n'elu conpletion. Faịlụ niile n'okpuru 100MB nwere ike converted kpam kpam free, Otú ọ dị ọrụ ga-mkpa nweta nkwalite ka a na-akwụ ụgwọ na akaụntụ iji tọghata faịlụ ibu karịa nke ahụ.
The n'elu Ndepụta ịdị iche iche ma na ọrụ na ala nke iji, na nanị ụzọ n'ezie achọpụta nke bụ ihe kasị mma maka gị nzube bụ ịgbalị ha!